गौचन हत्यामा संलग्न थप ३ जना पक्राउ, ३० वर्ष कैद सजाय माग ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
गौचन हत्यामा संलग्न थप ३ जना पक्राउ, ३० वर्ष कैद सजाय माग !
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्यामा संलग्न थप ३ जना पक्राउ परेका छन्। मुख्य अभियुक्तहरुलाई सहयोग गर्नेहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले राजकुमार साह, सूर्य बाजी र श्याम गुप्तालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरुमध्ये केहीले अभियुक्तहरुलाई सिमकार्ड दिएका थिए। केही पैसाको लेनदेनमा संलग्न भएको प्रहरीले जनाएको छ।
उनीहरु समातिएसँगै पक्राउ अभियुक्तको संख्या ११ पुगेको छ। घटनामा संलग्न ८ जनालाई यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो।
३० वर्ष कैद सजाय माग
गौचनको हत्यामा संलग्न अभियुक्तहरुलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजायको मागदाबीसहित प्रहरीले मंगलबार अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझासकेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले मंगलबार प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो। शुक्रबार अभियुक्तहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदै छ।
प्रहरीले संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको डिएसपी बेलबहादुर पाण्डेले बताए। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष र संगठित अपराध मुद्दामा थप १० वर्ष गरी सबै अभियुक्तलाई ३० वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ।
हत्याका मुख्य योजनाकार बस्नेतले लिखित बयानमा निर्माण व्यवसायी गौचनले आफूलाई साढे दुई करोड दिनुपर्नेमा त्यो नदिएपछि हत्या गरेको बताएका छन्। डाँफे कन्ट्रक्सनमा आफ्नो र कुमार घैंटेको लगानी रहेको र पैसा फिर्ता माग्दा नदिएपछि हत्या गरिएको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
यो पनि पढ्नुहोस छात्रावासमै शिक्षकबाट अँन्धी बालिका पटक पटक बलात्कृत
२७,पुष.२०७४,बिहीबार १५:०० मा प्रकाशित
← गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलोपटक राष्ट्रपतिद्धारा ‘बडामहाराजा’को शालिकमा माल्यर्पण
नेपाल – भारतका सन्धि तथा सीमा व्यवस्थापनबारे दिल्लीमा छलफल, आगामी असारसम्म इपिसीको म्याद ! →